Raiisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu soo dhaweyay Dalka Burundi+Sawiro – SBC
Raiisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu soo dhaweyay Dalka Burundi+Sawiro
Ra’iisal Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka ambabaxay magaalada Kampala ee dalka Yugandha, ayaa gaaray magaalada Bujumbura ee dalka Burundi.
Wafdiga Ra’iisal Wasaaraha oo ay ka mid yihiin Wasiirka Gaashaandhiga Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Faqi Marwo Xildhibaan Caasha Xaaji Cilmi iyo xubno la taliyeyaal ah ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyey madaxweyne kuxigeenka koowaad ee dalka Burundi Gervais Rufyikiri, xubno ka tirsan golaha Wasiirada iyo xildhibaano waxaana garoonka salaan ku siiyay cutubyo ka tirsan ciidamada Burundi.
Ra’iisal Wasaaraha oo warbaahinta la hadlay markii uu soo gaaray garoonka ayaa sheegay in booqashadan ay qeyb ka tahay booqasho uu ku soo maray dalalka ay ciidamada nabad illaalinta ah ka joogaan Soomaaliya, sida Jabuuti, Itoobiya, Yugandha, isaga oo xusay in dalka Burundi oo isna qeyb muhiim ah ka ah ciidanka AMISOM uu kala hadli doono arrimo ku aadan xiriirka labada wadan iyo iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo horumarka.
“Dalka Burundi waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo badan oo qeyb ka ah howlgalka nabad illaalinta ee AMISOM, waxaana dooneynaa inaan xoojino xiriirkeena, waxaana ka wada hadli doonaa arrimo badan oo khuseeya nabadda iyo iskaashiga labada wadan” ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa la filayaa in socdaalkiisa uu ku soo gabagabeeyo dalka Burundi, isagoo soo maray dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya.
Waxaa xusid mudan in Raiisul wasaaraha iyo wafdigiisu ka kici timeen magaalada Kampala xarunta dalka Uganda halkaas oo siweyn loogu soo dhaweeyay maalin nimadii shalay ilaa xalayna uu kulamo dhinacyo kala duwan kula qaatay isagoo dadkii uu la kulmay uu ka mid ahaa madaxweynaha dalkaasi.
Gara Salad Hersi